Ibsaa Jireenyaa - Page 69 of 70 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Abshir Rakkoo Booda Toltii ni dhuftii
December 19, 2015 Sammubani Leave a comment
Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Guyyaa tokko mukaa’u fi gaddutu jira,guyyaa biraa immoo mirqaansu fi gammachutu jira. Ilmi nama rakkoo fi tola keessa darbee qaroominna ijaara. Osoo tola qofa keessa jiraate laamsho ta’a. Rakkoon immoo lafee fi sammuu isaa jabeessun gara fuunduraatti akka tarkaanfatu godha. Read more